Xusuusta qaraxii 14-ka October oo Soomaalidu si weyn u xustay – Madal Furan
Hoy > Warka > Xusuusta qaraxii 14-ka October oo Soomaalidu si weyn u xustay
Xusuusta qaraxii 14-ka October oo Soomaalidu si weyn u xustay
Madal Furaan – Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan goboladda dalka iyo Qurbajoogtuba waxay Maanta si weyn u xuseen munaasabad loogu bariir diiqayay dadkii ku geeriyoodey musiibadii ka dhacday Isgoyska Soobe ee Magaalada Muqdisho laba sano ka hor 14-kii Bishii Octoober ee sanadkii 2017.
2-Sano kadib ayaa isgooska 14-October Ex-Soobe waxaa isugu soo baxay kumanaan dadweyna ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo kulan baroora diiq ah oo ay ugu duceynayaan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku geeriyooday isgooskaasi, iyadoo dadweynaa isku soo baxay gacmaha ku siteen baroor ay ku xardhan yihiin eraya ay ugu dhii dhinaaya falalka moocaas oo kale ah.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) iyo guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir oo ka qeyb galay kulankan baroor diiqda ah ayaa bulshadii isugu soo baxday isgooska 14-October ku dhiiragaliyay mowqif kooda ku aadan la-dagaalanka Al-Shabaab.
Dadka goobta ka hadlay waxaa qeyb ka ah Ayaan Maxamed oo kamid ah dhallinyarada Soomaaliyeed islamarkaana ciidamada qalabka sida ee qaranka ku biirtay kadib dhacdadii 14-October 2017 lagu xasuuqay kumanaan shacab.
Guddoomiyaha ururka Haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab waxa ay ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed in ay si wadajir ah ula dagaalamaan Al-Shabaab.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) oo fagaaraha isgooska 14-October Ex-Soobe kula hadlay kumanaanka ee qof ee isku soo baxay ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii goobtani ka dhacday laga bartay sida ay Shabaab u diidan yihiin nolasha iyo jiritaanka Soomalinimada waa sida uu hadalka u dhigay.
Isu-soo baxaii baroordiiqda aheyd ee Maanta lagu qabtay Isgoyska Soobe ayaa waxaa Maanta tegin oo ka baaqday Madaxda ugu sareysa dalka sida Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Boorame 4-ta Febraayo way u tahay maalin lagu xasuusto xasuuqii Jabhadda SNM ee Boorame iyo Dila
Xildhibaanada Baarlamaanka DFS oo maalintii Labaad ka shairaya amniga magaaladda Muqdisho
Qarax ay ku dhinteen ciidamo Puntland oo ka dhacay tuulada Af-urur